Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Tshintshela Trinidad and Tobago dollar Ukuze Yen » Ezokhenketho iTrinidad yokuvuselela amandla kunye noMntu oMtsha ophetheyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Tshintshela Trinidad and Tobago dollar Ukuze Yen
I-CEO entsha yezoKhenketho eTrinidad
Ezokhenketho iTrinidad Limited (TTL) zisandula ukubhengeza ukuqeshwa kweGosa eliyiNtloko lesiGqeba kulo mbutho. UKurtis Rudd ubizwe njengendoda entsha ephetheyo, esebenzayo kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo ngoSeptemba 2, 20.
Eli lelinye lawona maxesha anzima kwimbali yokuhamba nokhenketho eTrinidad, kwaye kufuneka ubunkokheli obutsha ukumanya icandelo.
Ngomnqweno wobomi bakhe bonke wokwakha uphawu kunye nothando olungalawulekiyo kwilizwe, uKurtis Rudd uhlala efuna ukuba ngumsebenzi kwilizwe lokuzalwa kwakhe.
URudd uthe uyaziqhenya ngokubekwa uxanduva lokukhuthaza iiasethi zokhenketho kwesi siqithi.
UKurtis Rudd uzisa ngaphezulu kweminyaka engama-25 yamava olawulo aphezulu kunye nentengiso ebanzi, unxibelelwano ngobuchule, kunye nobuchule bolawulo obuya kunceda Ezokhenketho iTrinidad njengoko iphinda inike amandla kuqoqosho lwezokhenketho lwesi siqithi. Eli lelinye lawona maxesha anzima kwimbali yokuhamba nokhenketho eTrinidad, kwaye kufuneka ubunkokheli obutsha ukudibanisa icandelo nokuchaza indlela ecacileyo yokuqalisa ngokukhuselekileyo kohambo lwamanye amazwe.
Ngomnqweno wobomi bakhe bonke wokwakha uphawu kunye nothando olungalawulekiyo kwilizwe, uKurtis Rudd uhlala efuna ukuba ngumsebenzi kwilizwe lokuzalwa kwakhe. Ubambe izikhundla eziphezulu zokuphatha kunye neenkampani ezihamba phambili zabathengi kwalapha nakwiiCaribbean kubandakanya iShell Caribbean, Prestige Holdings Limited, iiNkundla zaseTrinidad Limited, kunye ne-Guardian Life.
Ekwamnkelweni kwesi sikhundla, uKurtis Rudd uthe: “Ndiyazingca ngokujoyina abohlukeneyo kwaye banetalente IQela lezoKhenketho iTrinidad unikwe uxanduva lokwazisa iiasethi ezizodwa nezingaqhelekanga zesiqithi sethu kwilizwe liphela. Sikwixesha elibalulekileyo kuphuhliso lweshishini lokhenketho laseTrinidad, kwaye sidinga intsebenziswano yecandelo labucala kunye necandelo likarhulumente ukuze basebenzise amathuba eemarike angaphambili baphume kulo bhubhane. Ndonwabile ukuba nethuba lokusebenza neBhodi yaBalawuli, ekhokelwa nguCliff Hamilton. Sinethamsanqa lokuba nomntu onamava nobuchule kwezokhenketho kwihlabathi lonke ukukhokela umbutho. ”
Umnumzana Rudd ugqibile, . ”
Ophumelele kwiKholeji yaseFatima, uKurtis Rudd ubambe iMasters yoLawulo lwezoShishino (MBA), uLawulo Jikelele oluvela kwiKholeji yoLawulo yaseHenley, e-UK, kwaye ungumhlohli omkhulu e-UWI-ROYTEC. Utshatile iminyaka engama-25, uKurtis Rudd ujongene nomsebenzi okhawulezayo weshishini kunye nobomi bosapho kwaye uyakholelwa ngokuqinileyo ekulinganiseni ubomi bakhe kunye nomsebenzi wobungcali.
NgoSeptemba 23, 2021 kwi-09: 28
Kuya kufuneka ubonise ikopi eprintiweyo okanye elektroniki kwinqwelo moya ukuze ukhwele inqwelomoya yakho. Isiphelo sayo kukuthandeka kwabakhenkethi kubantu basekuhlaleni kwiindawo ezininzi zeCaribbean.